SEDRA-PITIAVAKO - NY HERIMAR - Tononkalo Malagasy - Serasera.org
SEDRA-PITIAVAKO - NY HERIMAR
Niantomboka ny fotoam-pianarana. Sedra no anarako. Zanaka fahatelon'ireo ray aman-dreniko aho. Anisan'ny tovolahy tia fianarana aho ary ny fahatanorako dia nirona tamin'izany avokoa. Roapolo taona manana ambiny iray aho ary tsy maintsy nandao ireo masoandro nipoirana satria hanohy fianarana any amin'ny faritra hafa. Tena tanora tokoa aho saingy tsy mbola niaina izay niainan'ireo ankamaroan'ny tanora amin'izao fotoana. Tokan-tena aho ary tsy mbola nanana olontiana izany. Maromaro izahay no andiany hiara-hanohy fianarana tany Tsiroanomandidy, lahy sy vavy ary samy avy amin'ny faritra maro samihafa teto Gasikara.
Ny volana Aogositra izahay no nigadona tany amin'ilay tontolo vaovao hiainanay sy hianaranay. Tsy haiko anefa fa toa niova nanarak'izany ihany koa ny fiainako, indrindra ny fiainam-pitiavako. Tsy izany mantsy fa tsy ampy iray volana akory dia latsa-pitia tamin'ity zazavavy anakiray ny tenako. Felana no anarany. Zazavavy sariaka, tsotso-piainana no mazoto miasa. Izy dia azo lazaina fa anisan'ny takaiky ny foko tamin'ireo mpianatra andiany niaraka tamiko. Natahotra anefa aho sao sanatria ka sendra fitia tsy ho anjara ny anay ka naleoko tsy naboraka taminy izany. Ny nataoko aza moa dia nandainga taminy mihitsy fa ilay tovovavy namany no tiako ary nila hevitra taminy ihany koa aza aho mba hiarahako tamin'ilay namany. Tsapako anefa fa fitia noterena no nitiavako azy satria tsy tia hanimba ny fifandraisako an'ity zazavavy akaikin'ity foko ity izaho. Marina tokoa hay anefa ilay oha-pitenenana hoe tsy misy takona tsy afenina.
Tsy izany mantsy fa nanjavona ho azy teo ity fitiavako noterena. Nafindrako tany aminà tovovavy hafa ilay fitiavako satria izany no hitako fa vahaolana tsy hanambarako ny ao am-poko tamin'i Felana. Kinanjo anefa tsy noraisin'ity zazavavy ity ilay fondrofondrom-poko. Angamba tsy navelan'Andriamanitra ho tanteraka izany satria fitia mifono fitaka, tsy tena fitiavana fa noforonin'ity saina. Teto ihany koa moa dia efa niezaka nandray an'i Felana toy ireo namako rehetra aho na dia sarotra aza izany.
Nitambatambatra ny andro sy ny volana ka lasan-ko taona. Herintaona latsaka izay ny nahatongavako taty Tsiroanomandidy. Fotoam-pialan-tsasatra tamin'izay. Nisy namanay samy avy any amin'ny faritr'i Manakara iny nitsidika anay. Sivy mianadahy teo ry zareo, nipetraka fotoana vitsivitsy tao aminay. Tamin'ity fotoana ity ihany koa no nampitsimbadika ny fiainam-pahatanorako tanteraka. Nirehitra tampoka indray ilay afom-pitiavako. Tsy voafehiko intsony ny afo ka hany nandoro ny akaniko rehetra. Fa nisy inona hoy ianareo ? Lasa saro-piaro tsy fidiny aho. Teto mantsy dia toa niantefa tany amin'i Ranja ilay mpanao vakansy ny tsikin'i Felana. Teny malefaka no henoko ifanaovan'izy roa ireo, dia ilay teny tsy ary nataon'i Felana tamiko nefa azon'ity tovolahy mpandalo ity. Nirehitra tany anatiko tany ny hatezerako kanefa zazavavy tsinontsinoko akory izy. Tsapako teto fa mafy izany mitia mangina izany.
Nanomana fitsangatsanganana ireo mpiara-mianatra tamiko taty Tsiroanomandidy mba ho fiaraha-mikorana saingy tsy nandeha aho satria tsy te-hahita ny sangisangin'i Felana sy Ranja any. Indray hariva izay raha nisavasava ny findain'i Felana aho dia nipitrapitra ny masoko. Endrey ireto sarin'izy sy Ranja, toy ireny olona mifankatia tokoa ireny. Izato tovolahy toa mianoka ny tsikiny tanteraka. Niha-nitombo hatrany noho izany ny ahiahiko. "Dia sanatria ve ka tena lasa niaraka tokoa izy roa ireto e...Felana ilay tiako!", hoy ny bitsiky ny foko tao anaty. Nanomboka teto ihany koa dia nalahelo lava izany ny tenako. Nanenina mafy ihany koa izaho tamin'ny zavatra rehetra nataoko.
Tapitra ny fotoam-pialantsasatr'ireo namanay ka nandeha nody ry zareo. Ny zavatra nahagaga ahy sy tena namparary ny foko anefa dia i Ranja nijanona. Vao mainka nihasaro-piaro aho ary indrindra moa, nihitatra ny ratra tato am-poko. Niova endrika tanteraka aho ary na i Felana aza gaga ka nanontany ahy hoe: "fa misy inona no tsy miteniteny ialahy, sa marary ?". Tsy niteny aho fa namaly azy tao am-po hoe: "eny marary noho ianao aho". "Ialahy? Izany tokoa moa izany no mba azoko e, nefa ity Ranja mpandalo mahazo ianaonao ?"
Lasa nanana eritreri-dratsy aho: "moa ve dia noho ny fahantrako e ?". Voatery niaritra ny teny malefadefaka sy ny tsikitsiky nifanaovan-dry zareo tao an-trano aloha aho mandra-pahalasa an'i Ranja. Lasa nitsiry fialonana satria tsy mbola nahazo izany fihetsika izany tamin'i Felana aho. Marina fa sariaka amiko izy saingy ny tsapako tamin'izy roa ireo angamba no atao hoe pi-maso sy korananà mpifankatia izay mbola tsy niainako izany. Nalahelo tao am-poko izaho saingy atao ahoana moa. Niezaka hatrany anefa aho mba tsy hahatsapan'i Ranja ny fihetsiko.
Tsy maintsy handeha hiverina hamonjy ny akany fodiany ihany koa i Ranja teto saingy indrisy....nandeha nanatitra azy i Felana. Nisentosento tao anaty lamba aho. Ny eritreritro mantsy dia milaza fa miaraka izy roa ireto. Maloka tanteraka ny fiainam-pitiavako teo nefa nampionon-tena no hany sisa azoko natao.
Indray alina izay, raha natory talohan'i Felana aho, dia taitra tamin'ny iray ora maraina. Toa maheno feon'olona anankiroa mifampiresaka. "Fa manonofy ve izaho izany sa...toa maheno feon'i Ranja...". Natongilako ny sofiko ary hay tsy nofy tokoa ilay henoko fa tena izy. Niantso an'i Felana amin'ity andro mamantonalina ity tovolahy. Feo malefadefaka toa feno fitia no amalian'ity zazavavy tiako ity azy ary arahiny tsikitsiky mambabo fo. Nisentosento teo ambony fandriana izaho, tohina ilay fery mbola tsy sitrana tato anatiko ka niverina naratra indray. Tsy tantiko ny nihaino ny resa-dry zareo ka tsy tanako intsony ny ranomasoko. Niala teo ambony fandrianako aho, tapa-kevitra aho fa hivoaka hankany amin'ny efi-pidiovana hitomany. Nosokafako ny varavarany ary naketoko mafy. Nijanona minitra maromaro tany aho dia niverina. Indrisy anefa tsy mbola tapitra ihany ny resak'izy ireo. Niezaka niaritra nihaino aho saingy tsy zakako izany ka ny ranomasoko no namonto ny tavako. Tsy tiako ho fantatr'i Felana anefa izany ka nanapa-kevitra hiverina any amin'ny efi-pidiovana aho nandritra ny fotoana maromaro. Niverina teo am-pandriana izaho avy eo. Tsy nahita torimaso intsony izaho nandrapahamaraina ny andro. Nitady hevitra izaho mba hanatoniako ny fanaintainan'ny vatako tato anaty ka ny hifamihina amin'i Felana no hitako fa vahaolana.
Nangatahiko taminy tokoa izany nony maraina ny andro saingy nolaviny anefa izany. Nitombo avo heny ny tolokoko ary nangidy ny vavako ka tsy nahahinana sakafo akory. Lasa niara-nivoaka izahay avy eo ary tsapany fa tsy toy ny isan'andro tokoa ny fahitany ahy. Niezaka nanontany ahy izy saingy lainga no navaliko azy: "te hody fotsiny re aho fa tsisy inona a..." Nanjombona foana ny tontolon'androko ary toa tsy mitsaha-mitombo ny fanaintainako. Tena tsy nahafantatra ny fitiavako azy tokoa i Felana ka rariny tokoa raha zavatra nanindrona ny foko no noteneniny. Noheveriny mantsy fa manembona an'ilay namany notiaviko aho. "Ianao mantsy...", hoy aho tao am-poko. Raha mba nolazaiko azy tokoa moa ny fitiavako dia mba fantany ihany ary mety tsapany koa ny fahoriako. Raha holaviny indray anefa dia inona no mety hitranga ? Nalahelo tanteraka ny fahatanorako aho. Tsy mbola niaina akory izany fitia mifamaly izany. Te-hamono tena aho saingy moa vahaolana ve izany? Nangala-pijery no hany sisa nataoko.
Tamin'ny andron'iny ihany, nivoaka ny efitrano izy fa handeha hianatra lesona any amin'ny tampon-trano,hono, hoy izy tamiko. Efa tafahoatra loatra ny hasarotam-piaroko tamin'ity zazavavy ity ka nivoaka nanaraka azy afaka fotoana vetivety taorianan'ny nivoahany. Ny zavatra nahagaga ahy anefa dia tsy hitako izy. Nivoaka ny trano aho ary nandrato nitady azy tany ivelany tany. Inona hoy ianareo no zava-nitranga ? Hitako i Felana tao amin'izay toeram-pisakafoana iray izay, niaraka amin'ity tovolahy tsy mbola hitan'ny masoko tamin'ny androm-pisiako. Mety mpiara-mianatra aminay angamba. Nalahelo mafy ny foko saingy tsy hitako izay natao. Niverina haingana aho satria ny masoko efa nanganohano ka natahotra aho sao hivatravatra aty amiko daholo ny mason'ireo olona manodidina ahy. Fitadiavana alalana hivoahany ny trano fotsiny no nitondrany ilay boky. Tonga tato an-trano aho ary nitomany . Ny ondako sisa no nofihiniko ary ny ranomasoko nitsiroroka namonto ny fandriako. Kivy tanteraka aho nefa nionona satria izany no anjara. "Fa maninona re izaho no dia tafalatsaka ato anatin'ity ngidim-pitia ry Tompo ô", hoy ny teniko sady mitomany. Tsy nahita tory indray aho nandritra ny alina tontolo ary nihidy tanteraka ny vavoniko ka tsy nahatelin-kanina ihany koa. Tsy mba nitsiky tamiko ny vintana ka nanjombona tanteraka ny fiainako, indrindra ny fiainam-pitiavako. Tsy sahy namboraka tamin'i Felana ny fitiavako azy intsony aho ary nitia nangina no vahaolana farany hitako.
Toy izany ny fiainam-pitiavako, tsy mba nisy nangirana fa nanjombona hatrany.
NY H. 2019
Sokajy : Alahelo, fananarana, fiainana, Fitiavana, SOMBINTANTARA
Daty : 15/09/2019
Mpamangy : 1651